Sida Loo Sameeyo Falanqaynta Tartamayaasha ee Lagu Ogaanayo Rajada Dhismaha Xiriirka | Martech Zone
Sida Loo Sameeyo Falanqaynta Tartamayaasha ee Lagu Ogaanayo Rajada Dhismaha Xiriiriyaha
Sideed ku heli kartaa rajooyin cusub oo backlink ah? Qaarkood waxay doorbidaan inay ka raadiyaan degello mawduuc la mid ah. Qaarkood waxay raadiyaan tusaha ganacsiga iyo shabakadaha 2.0. Qaarkoodna waxay ku iibsadaan backlinks-ka tiro badan waxayna rajeynayaan waxa ugu fiican.
Laakiin waxaa jira hal hab oo lagu xukumi karo dhammaantood waana cilmi -baare tartame. Shabakadaha ku xira tartamayaashaada waxay u badan tahay inay mawduuc ahaan khuseeyaan. Waxaa intaa dheer, waxay u badan tahay inay u furan yihiin iskaashi backlink. Tartamayaashaaguna waxay qabteen dhamaan shaqadii helitaankooda, sidaa darteed waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad dhex gasho oo aad naftaada u qaadatid himilooyinkooda.
Tilmaamahan, waxaad ku baran doontaa sida loo helo tartamayaashaada runta ah, waxaad ku ogaan kartaa gadaal gadaal, iyo amaahan kuwa leh awooda ugu sareysa.
1. Raadi Tartamayaashaada runta ah
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah in la ogaado cidda runta ah ee tartamayaashu raadinayaan oo aad doorato kuwa ugu fiican ee lagu basaaso. Xusuusnow tartamayaashaada raadinta inaysan daruuri ahayn kuwa kula tartamaya noloshaada dhabta ah. Taabadalkeed, kuwani waa websaydhada qiimeynaya boggaga natiijada mashiinka raadintaada (SERPs), yacni ereyada muhiimka ah ee kujira niche. Cilmi baaristaan ​​sidoo kale waxay kaa caawin kartaa inaad go'aamiso miisaaniyada la qiyaasay mustaqbalkaaga iskuxirka dhismaha.
Habka ugu fudud ee lagu arki karo cidda tartameyaashaadu muhiimka yihiin waa inaad ku qorto ereyada furaha mirahaaga ee Google oo aad aragto meelaha ay ka muuqdaan Google SERP inta badan. Hadda, waxaad heli doontaa bogag internet ah oo qariib ah, sida Caafimaadka Ragga ama Forbes ama joornaalada kale ee qaab nololeedka loogu talagalay darajooyinka ereyada aad u fiican, laakiin, baaritaanno yar ka dib, waa inaad fikrad fiican ka heysataa cidda dhab ahaan ka shaqeyneysa niche.
Dabcan, xoqitaanka dhammaan ereyada muhiimka ah ee mirahaaga iyo qorista boggaga internetka ee ugu badan inta badan maahan waxtar badan. Nasiib wanaag, falanqaynta tartan waa caqabad guud oo ku timaadda SEO-yada iyo milkiilayaasha degellada, sidaa darteed waxaa jira aalado badan oo xirfadleyaal ah oo xawaareyn kara howsha. Haddii aad horey u isticmaaleyso qalab SEO ah, ha noqdo Moz, Semrush, ama Ahrefs, waxay u badan tahay inay leedahay nooc ka mid ah cilmi baarista tartameedka oo la dhisay. Waxay kuxirantahay aaladda SEO ee aad isticmaasho, waxaad awoodi doontaa inaad ku garato tartamayaashaada raadinta midkood mawduuc ama domain, ama mararka qaarkood labadaba.
Si loo aqoonsado kuwa kula tartamaya mowduuc, waa inaad gashaa dhowr eray oo keyword ah aaladuna waxay kaheli laheyd websaydhada ugu sareeya ee loo qoondeeyo keywords keywords badanaa. Habkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jeexjeexdo-soo qaado ereyada muhiimka ah oo aad raadiso tartamayaasha ku jira niche cidhiidhi ah.
Si loo aqoonsado tartamayaasha domain, waa inaad soo gudbisaa boggaaga. Qalabku wuxuu falanqeyn doonaa dhammaan ereyada muhiimka ah ee aad ku qiimeyso oo waxaad ka heli kartaa boggag internet oo leh ereyga ugu weyn ee muhiimka ah. Habkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho shabakado tartame oo aad ugu eg boggaaga, in kasta oo niche uu ka ballaadhnaan karo intaad ugu talo gashay.
Markaad hesho liiska tartamayaasha, aaladda SEO badankood waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku qiimeyso adoo adeegsanaya qiyaaso kala duwan oo tayo leh. Qiyaasaha ugu caansan waxaa ka mid ah maamulka domain, taraafikada dabiiciga ah, iyo boqolleyda isgoyska muhiimka ah, ie sida ay ula mid tahay websaydhka tartame. U adeegso cabirradani si aad u kala doorato inta u dhexeysa shan illaa toban tartameyaal tayo sare leh si aad u sameyso cilmi baaris dhab ah.
2. Raadi Backlinks-kaaga Tartamayaashaada
Markaad la timaado liiska kuwa kula tartamaya, waxaad u dhaqaaqi kartaa inaad baartid astaamahooda gadaal gadaal.
Si dhakhso ah u hubinta dhabarka dambe ee tartame, waad isticmaali kartaa mid kasta qalabka hubinta gadaal. Ku qor cinwaanka tartame si aad u aragto boggaga saxda ah ee ku xiraya degel, URL-yada ay ku xirmaan, qoraalladda barroosinka, darajooyinka darajooyinka, haddii xiriirku yahay dofollow iyo in kale:
Haddii aad rabto inaad ku dhaqaaqdo cilmi-baaris dhammaystiran oo ku saabsan backlinks-kaaga tartameyaasha, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato software SEO oo xirfad leh. Qalab gorfeyn tartame oo heersare ah ayaa kuu oggolaanaya inaad baartid dhowr tartame hal mar, iyo sidoo kale shaandhaynta gadaal laga helay awoodeed, goobta, sumadaha nofollow, halista ganaaxa, iyo xuduudaha kale:
Dood ahaan, mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee cilmi baarista backlink waa markaad arki karto websaydhada isku xiraya laba ama in ka badan oo tartamayaashaada ah. Websaydhyadani waa rajadaada ugu horreysa ee dib-u-helidda - waxay u badan tahay inay ku shaqeeyaan nalkaaga waxayna u dhowdahay inay iskaashi gaar ah la yeeshaan mid ka mid ah tartamayaashaada.
3. Xulo Fursadaha Backlink ee Adag
Markaad jiido liistada buuxda ee xiriiriyeyaasha dambe ee tartamayaashaada, waxaad u badan tahay inaad haysato kumanaan, mararka qaarkood tobanaan kun oo boggag internet ah. Taas oo si cad u aad u tiro badan oo aan qaban karin olole wacyigelin wax ku ool ah. Ka sokow, si indho la’aan ah u koobiyeynta dhammaan rajada backlink ee tartamayaashaadu ma ahan istiraatiijiyadda ugu fiican, maadaama qaar iyaga ka mid ah laga yaabo inay bixiyaan backlinks tayo-yar oo waxyeelleynaya kaliya SEO-gaaga
Si loo soo gaabiyo liiska rajadaada backlink-ka illaa heer la maareyn karo, waxaad u baahan tahay inaad iska tuurto websaydhada bixiya backlinks tayo-hooseeya. Waxyaabaha ugu caansan ee tilmaamaya tayada rajada backlink waxaa ka mid ah:
Maamulka domain. Markasta oo ay sarreyso, ayaa ka sii fiican. Meelaha awooda sare leh waa websaydhada iyagu iyagu leh backlinks badan, waxyaabo tayo sare leh, iyo khibrad isticmaale oo wanaagsan, sidaa darteedna awood badan uga sii mara xiriirinadooda.
Dofollow / nofollow. Si ka duwan xiriidhada nofollow, xiriiriyeyaasha dofollow waxay awood u leeyihiin inay u gudbiyaan casiirka isku xirka bogagga ay tagayaan. Xidhiidhyada 'Nofollow' gebi ahaanba faa'iido ma leh, laakiin kuma biirinayaan qiimeyntaada. Waa caadi in la helo xiriiriyeyaal nofollow ee ku jira astaantaada, laakiin waa inaadan luminin ilahaaga si aad uga hesho wax badan.
Iskuxirka isku xidhka Sidii horeyba loo soo sheegay, boggaga ku xiraya laba ama in ka badan oo tartamayaashaada ayaa si gaar ah qiimo ugu leh rajada backlink.
Khatarta ganaax. Xidhiidhyada ka yimaada shabakadaha hadhka leh oo leh waxyaabo khafiif ah ama aan macno lahayn, tan xayeysiis ah, iyo waayo-aragnimo isticmaale xumo ayaa kugu dejin kara biyo kulul Google.
Waxay kuxirantahay aaladda SEO ee aad u adeegsatay soo uruurinta rajada gadaal, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho qaar ama dhammaan cabirradan kore si aad u shaandhayso liiska backlinks. Tusaale u soo qaadashada Moz, waad yeelan doontaa DA maamulka domain, Dhibcaha Spam, Iyo Goobaha isgoyska:
Qalabka kale ee SEO-ga ah ayaa laga yaabaa inuu yeesho cabbirro kala duwan ama magacyo kala duwan oo isku mid ah, laakiin hawshu asal ahaan waa isku mid. Waa inaad go'aan ka gaartid waxa aad ka qabaneyso (tusaale maamulka webka> 60; khatarta ganaaxa> 50) oo aad u kala shaandheysaa rajooyinkaaga si waafaqsan. Tilmaam dejintaada illaa intaad kaga hartay tiro ku qanacsan oo rajo ah waana tan liiskaaga.
4. Bilow Ololayaasha Gaarsiinta
Hadda oo aad haysato liistada liistada rajooyinka sare, waxaa la joogaa waqtigii la arki lahaa midkood oo diyaar u noqon doona inuu martigaliyo backlinks-kaaga.
Tallaabada ugu horreysa ee ololahaaga wacyigelinta waa inaad u kala qaaddo himilooyinkaaga qaybo kala duwan oo aad doorato hab sax ah oo lagu dhiso isgaarsiinta qayb kasta. Fur bogagga aad u xulatay liiskaaga xulashada, oo hubi halka saxda ah ee xiriiriyeyaasha dambe ee la dhigay bogga. Qaybsanaanta rajooyinka iyadoo loo eegayo qaab-celinta dhabarka.
Waa kuwan tusaalooyinka waxa gadaal xiriirku u ekaan karo:
dib u eegista;
qaybaha shuraakada ganacsiga;
Haddii aad isticmaaleyso softiweer wacyi gelin gaar ah leh, waxaad u badan tahay inaad awoodi karto inaad ku calaamadeyso rajadaada isla meeshaas. Haddii kale, nuqul ka sameyso bogga dambe ee rajada gogol xaashida 'Excel', isla markaana calaamadee qaybaha jadwalka soo socda:
Kadib waxaad u kala saari kartaa rajooyinkaaga qaybo, waxaad ka heli kartaa macluumaadka xiriirka, oo waxaad bilaabi kartaa wacyigalintaada. Xullo template email iyadoo la raacayo nooca rajada, oo si toos ah u dhah waxa aad weydiisan doontid, iyo waxaad ku soo bandhigi doonto beddelkeeda.
Xusuusnow inaad kadhigto fariintaada gaarsiinta shaqsiyeed. Dadku ma jecla xarfaha bot-like-ka ah, badiyaaana waxay tirtiraan iyaga oo aan akhrin.
note: Baadhitaanka rajadaada ayaa ku siinaysa fursad kale oo aad ku hubiso websaydhkooda ku habboonaanta iyo tayada oo aad ka saarto rajooyinka kale ee badan liiska. Sidoo kale, haddii aad ogaato in degellada qaarkood ay yihiin tusaha ganacsiga, websaydhada websaydhka 2.0, ama meelaha kale ee aad xor u tahay inaad wax ka abuurto, looma baahna inaad la xiriirto U wareeji liis ka duwan oo ku dheji dhabarkaaga dambe qaab kasta oo loo baahdo.
5. La soco Profile-kaaga Backlink
La socodka taariikhda backlink-kaaga ayaa kuu oggolaan doonta inaad aragto haddii backlinks cusub ay wax isbeddel ah ku sameeyeen boosaskaaga darajo, ogeysii haddii wax qaldamaan, oo baar wixii arrimo soo kordha ah.
Si lama filaan ah qulqulka dhabarka tayada-hooseeya waa mid ka mid ah waxyaabaha u baahan kara inaad fiiro gaar ah u yeelato. Waxay noqon kartaa a Weerar SEO xun mid ka mid ah tartamayaashaada, ama xiriiriyeyaashu waxay u muuqan karaan si dabiici ah, ama waxay noqon kartaa wakaaladdaada SEO inay iibsato xiriiriyeyaal tayadoodu hooseyso ee boggaaga. Laakiin sabab kasta ha noqotee, kor u kaca lama filaanka ah ee xiriirka spammy wuxuu soo jiidan karaa dareenka Google oo wuxuu kugu kasbanayaa ganaax. Ka soo kabashada ganaaxa noocan oo kale ah waxay qaadan kartaa dhowr bilood illaa, si fiican, marna.
Haddii aad ku aragto koritaan shaki leh tirada backlinks ee boggaaga, hubi inaad baarto haddii xiriiriyahan ay wanaagsan yihiin ama xun yihiin iyo halkee ayey ka yimaadeen. Haddii xiriiriyayaashu xun yihiin, isku day inaad la xiriirto milkiilayaasha websaydhka oo aad weydiisato inay ka saaraan ama ugu yaraan ay furfuraan xiriiriyeyaasha. Haddii aan la samayn karin, markaa waad isticmaali kartaa Qalabka disavow ee Google inaad Google u sheegto inaadan waxba ku lahayn iyaga.
Hoos u dhac degdeg ah oo ku yimid gadaal gadaal tayo sare leh waa shay kale oo u baahan in aad u fiirsato. Tani way dhici kartaa sababtoo ah bogga isku xirka wuxuu u guuray URL kale, waa la tirtiray, bogga boggiisa ayaa is beddelay, ama dhabarka dambe laftiisa waa la tirtiray ama waxaa lagu beddelay xiriiriye qofka kula tartamaya. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto lammaanaha gadaal si aad u aragto waxa dhacay una soo celiso backlink haddii ay suurogal tahay.
Ha ilaawin inaad kormeerto astaamaha gadaal ee tartamayaashaada, sidoo kale. Fiiro gaar ah u yeelo kororka dhowaanta lama filaanka ah ee tirada gadaal. Haddii ay jiraan, hubi halka ay ka yimaadeen. Haddii rajada cusubi u muuqato mid lagu kalsoonaan karo, tixgeli inaad ku darto wacyigelintaada, sidoo kale.
Falanqaynta tartanku waa habka ugu wax ku oolka badan ee lagu helo rajada backlink tayo leh. Ma jiro hab kale oo keeni kara darajadan ku habboonaanta. Hoggaamiyayaashuna sidoo kale way kulul yihiin, maadaama tartamayaashaadu ay horeba u maareeyeen inay dhigto dhabarkooda halkaas. Xaqiiqdii waa goob laga bilaabayo dhismaha dhabarkaaga dambe ama wax aad isku daydo haddii aadan horay u tijaabin.
Tags: falanqaynta backlinkfalanqaynta tartame backlinkdib u noqoshoiskaashi backlinkdib u xiridfalanqaynta tartamayaashaisku xirka dhismahaiskuxirka dhismahaiskuxirka dhismahaxiriiriyaharaadinta dabiiciga ahayna search enginefalanqaynta seoawoodaha seo
Aleh Barysevich waa Aasaasihii iyo Madaxa Sarkaalka Suuqgeynta ee shirkadaha ka dambeeya SEO PowerSuite, softiweer xirfadle ah oo loogu talagalay ololeyaasha wareegga buuxa ee SEO, iyo Awario, a warbaahinta bulshada, iyo aaladda kormeerka webka. Isagu waa khabiir ku takhasusay SEO iyo afhayeenka shirarka warshadaha waaweyn, oo ay ku jiraan SMX iyo BrightonSEO.
Qiimaha Dhisida Talaabo Kasta Oo Safarka Macaamiishaada ah
Stirista waxay awood siineysaa Garaafkeeda Aqoonsiga cusub oo leh Xogta-waqtiga-dhabta ah